कांग्रेस बैठकमा संस्थापन पक्ष पनि आक्रामक, कसले के भने ? - inaruwaonline.com
कांग्रेस बैठकमा संस्थापन पक्ष पनि आक्रामक, कसले के भने ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख १३, २०७५ समय: ८:४९:१४
काठमाडौं । चुनावी समीक्षा गर्न बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा गुटअनुसार पक्ष-विपक्षमा आरोप-प्रत्यारोप जारी छ।
रामचन्द्र पौडेल समूहका नेताहरू चर्को आलोचनामा उत्रिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताहरूले आक्रामक रूपमा प्रतिवाद गरेका हुन् । बुधबारको बैठकमा देउवा पक्षधर नेताहरूले रामचन्द्र पौडेलले केही समयअघि पेस गरेको चारपन्ने आरोप र मंगलबार युवा नेताहरूले पेस गरेको प्रस्तावका बुँदामाथि आपत्ति जनाए।
हामी सबै बसेर टिकट दिएका हौँ । टिकट दिएपछि हारको जस–अपजस सबैले लिनुपर्छ । पार्टीको पराजयको कारण अन्तर्घात पनि हो । अब यही ढर्राले पार्टी चल्दैन । नयाँ सोच र एकढिक्का बनाएर पार्टीलाई अघि बढाऔँ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।